#Dhugaan Jirtuu : Shira Siyaasaa Abiyyi Ahimad Xaxaa Jiru: – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#Dhugaan Jirtuu : Shira Siyaasaa Abiyyi Ahimad Xaxaa Jiru:
Shira Siyaasaa Abiyyi Ahimad Xaxaa Jiru:
Abiyyi Ahimad maqaa fakkeessaa “Oromoon filannoo qabaachuu qaba” jedhuun paartii siyaasaa haaraa bixilee gadi baasuuf hojjetaa jira. Akka Odeessa qabatamaa keessoo Bilxiginnaa baatetti Abiyyi shira kana ega qopheessee booda namoota muraasa waamee koree utubee “homework” itti kenne.
Ijaarsa paartii sobaa kanaaf Abiyyi Ahimad akka sababaatti kan kaase “Amaarri na hojjechiisaa hin jirtu. Oromoon paartii tokko akka filannootti qabaachuu qaba. Nutis ni ijaarra; isinis warra nu jalatti hin ijaaramin funaanaa ijaaraa” kan jedhuudha. Dabalataan paartii lukkee/kittillayyoo haaraa kanaaf maqaa sabaatiin otoo hin tahin maqaa Halluu ykn maqaa Ideology siyaasaa ykn kan biraa otoo tahe wayya kan jedhus yaada kennee jira Abiyyiin.
Ergamni paartii haaraa kanaa Qeerroo fi hayyoota Oromoo Bilxiginnaa morman of jalatti ijaaruudhaan paartii lukkee PPn ajejuun afaanfajjii uumani umurii aangoo Abiyyi Ahimad dheeressuu dha. Namoota waamicha dhoksaa Abiyyi Ahimad kanarratti argamani fi diraamaa kana hojjetaa jiran keessaa:
1.Dr Diimaa Nagawoo…Qindeesaa Koree kanaa
2. B/J Kamaal Galchuu
3. Abbaa Nagaa Jaarraa
4. B/J Hayiluu Gonfaa
5. Obbo Ibsaa Nagawoo
5. Alamuu Simee fi kanneen birooti.
Namoonni maqaan isaanii qabsoo Oromoo keessatti beekamanii fi yeroo ammaa garuu hojii diigumsaa irratti bobba’uuf jiran kunniin diraamaa kana raawwachuuf karaa adda addaa duula hojii (operational activities) eegalanii jiru. Duula kanaafis dhaadannoo 2 qabatanii as bahan.
1ffaa, tokkummaa dhaabota maatii ABO ijaaruu kan jedhuu fi
2ffaa, Jaarmiyaa dhaloota haaraa fi qabsaawota gameeeyyii ijaarra kan jedhuu dha.
Hojii shiraa hundeeffama paartii kittillayyoo kanaaf deeggarsi maallaqaa konkolaataa fi biiroleen hundi ni taasifama. Paartileen armaan dura Boordii Filannootti galma’anii jiranis of-diiganii (to be dissolved) akka haaraatti qaama diraamaa kanaa tahuuf jiru.
Ajajaa WBO Zoonii Baha Oromiyaa, Jaal ODAA QABSOO waliin marii taasifame – https://t.co/IDJU1CSDgd pic.twitter.com/m3PUyLr5du
— Kichuu (@kichuu24) August 30, 2020
Dubbii Ambassador Dirribaa Kumaa irratti haturruuti. Dirribaan Abiyyi irratti komii qaba naan jedhan. Maali jennaan yaada “piroojektii lageen magaalaa Finfinnee bareechuu” ani maddisiisef beekkamtii nadhoowwate jedha jedhan. Akkamitti jennaan “Riverside Project” kan jedhan kun yaada Abiyyi Ahimad akka ta’etti miidiyaa irratti kan odeeffamaa jiru kijiba Dirribaatu bara 2015 jalqabsiise naan jedhan. Ragaan kunooti. Yaanni Abiyyi irraa dhufe masaraa mootummaa keessa siidaa ijaarsisuu qofa.